La wadaag Dhacdada Jacaylka mar kale faa'iidooyin Cunnooyin on Wheels - Meals on Wheels
Mar labaad, haddii aad suuqa ugu jirto baabuur cusub, waxaad sidoo kale saameyn ku yeelan kartaa nolosha dadka qaata Cunnooyinka Taayirada iyadoo loo marayo 2021 Subaru La wadaag dhacdada Jacaylka. Ilaa Janaayo 3, 2022, baabuur kasta oo cusub oo Subaru ah oo la iibsado ama la kireeyo, Subaru wuxuu ku deeqi doonaa $250 doorashada macaamilka ee samafalka ka qaybqaadashada.
Meals on Wheels waa mid ka mid ah afarta hay'adood ee samafalka ee kaqeyb galaya waana tan iyo markii la bilaabay dhacdada Iyada oo loo marayo dhacdadan, xubin ka ah Cuntada Wheels America, Metro Meals on Wheels waxay ka heli doontaa qayb ka mid ah deeqda gawaarida Subaru ee lagu iibiyo kaqeybgalayaasha Subaru ee kaqeyb galaya.
Haddii aad suuqa u joogto si aad u iibsatid baabuur cusub, fadlan eeg Subaru Wadaag Dhacdadii Jacaylka inaad waxbadan ka barato. Subaru waad ku mahadsantahay taageerida waayeelka maxalliga ah dhacdadan!